Puerto Rico is open for tourism! | Travel Destination Update
ပင်မစာမျက်နှာ » ရေးသားချက်များ » ခရီးလမ်းဆုံး » Puerto Rico ခရီးသွားလုပ်ငန်းအတွက်ပွင့်လင်းသည်!
Breaking ခရီးသွားသတင်းများ • ခရုစ်စက်မှုသတင်း • Industry ည့်ဝတ်ပြုခြင်းလုပ်ငန်းသတင်းများ • ဟိုတယ်နှင့်အပန်းဖြေစခန်းများ • နိုင်ငံတကာ itor ည့်သည်သတင်း • အခြား • Puerto Rico • အပန်းဖြေစခန်းအဆင့်သတ်မှတ်ချက်များ • တာဝန်သိခရီးသွားသတင်း • လုံခွုံမှု • ခရီးသွားသတင်း • သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးသတင်း • ခရီးသွား Destination Update ကို • ခရီးသွားသတင်းများ • Travel ကြေးနန်းသတင်းများ
Puerto Rico ခရီးသွားလုပ်ငန်းအတွက်ပွင့်လင်းသည်!
ဇန်နဝါရီလ 10, 2020
Puerto Rico ကိုရှာဖွေပါ Puerto Rico သည်ဖွင့်လှစ်ထားပြီးမကြာမီကဖြစ်ပွားခဲ့သောငလျင်လှုပ်ပြီးနောက် visitors ည့်သည်များလာရောက်လည်ပတ်ကြောင်းနယ်လှည့်အများပြည်သူအားအာမခံသည်။
•အပျော်စီးသင်္ဘောဖြင့်ခရီးသည်များကိုကြိုဆိုခြင်း။ ။ မနေ့ကကျွန်တော်တို့သင်္ဘောသုံးစီးကနေခရီးသည် ၁၅၀၀၀ နီးပါးကိုကြိုဆိုခဲ့ကြတယ် San Juan Cruise Port Old San Juan ၌တည်၏။
• Old San Juan စွမ်းအားတက်သည်။ San San Juan တွင်ပါဝါကိုအပြည့်အဝပြန်လည်ထားရှိပြီးကျွန်းတစ်လွှားတိုးတက်မှုကိုပြုလုပ်နေသည်။ အဓိကဟိုတယ်အားလုံးသည်ပုံမှန်အားဖြင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများဖြစ်သည် (မီးစက်နှင့်မပါဘဲ)
•အခြားသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးများအပြင်လေယာဉ်အားလုံးသည်ပုံမှန်အတိုင်းပုံမှန်လည်ပတ်နေသည်။ လေယာဉ်အားလုံးသည် San Juan Luis Muñoz Marin၊ Ponce နှင့် Aguadilla လေဆိပ်များသို့ပုံမှန်လည်ပတ်နေသည်။ တက္ကစီနှင့်စီးနင်းရှယ်ယာရွေးချယ်စရာများလည်းရရှိနိုင်ပါသည်။ ဗီယက်စ်နှင့်ကူဘဘရာသို့ / ကူးတို့သင်္ဘောများပြေးဆွဲနေပြီ။
•ဆွဲဆောင်မှုများဖွင့်လှစ်: Ponce Cruise Port, Puerto Rico Convention Center နှင့် El Morro, El Yunque, San Cristobal Fort နှင့် San Juan ပတ်လည်ရှိnorthernရိယာအားလုံးအပါအ ၀ င်အဓိကဆွဲဆောင်မှုများ၊ စီးပွားရေးအတွက်ဖွင့်လှစ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကမ်းခြေများ၊ စားသောက်ဆိုင်များ၊ ဆွဲဆောင်မှုများ၊ ဟိုတယ်များနှင့်ကျွန်းတစ်လွှားခရီးသွားဝန်ဆောင်မှုပေးသူများသည် Puerto Rico ၏ထူးခြားသောယဉ်ကျေးမှုနှင့်ခရီးသွားများကိုနွေးထွေးသော hosp ည့်ဝတ်ကျေပွန်မှုကိုမျှဝေရန်အဆင်သင့်ရှိသည်။
လာမည့်အစီအစဉ်များနှင့်အတူခရီးသွားများသည်၎င်းတို့၏ခရီးသွားဝန်ဆောင်မှုပေးသူများ၊ ဟိုတယ်များနှင့်အခြားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများနှင့်ဆက်သွယ်သင့်သည်။ ခရီးသွားများလာရောက်ရန်ကျွန်ုပ်တို့အကြံပြုပါသည် DiscoverPuertoRico.com နောက်ဆုံးပေါ်သတင်းအချက်အလက်နှင့်ခရီးသွားနောက်ဆုံးသတင်းများသည်။
•တောင်ပိုင်းဒေသသည်အထောက်အပံ့များရရှိနေသည်။ အရေးပေါ်အခြေအနေကြောင့်ခရီးသွားများအနေဖြင့်ဖျောင်းဖျသင့်သည်။ အုပ်ချုပ်ရေးမှူးVázquezကတောင်ပိုင်းဒေသရှိလိုအပ်သူများအားလုံလောက်သောအစိုးရရန်ပုံငွေနှင့်အထောက်အပံ့များရရှိစေရန်ဆက်လက်လုပ်ဆောင်ရန်အတွက်ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ တောင်ပိုင်းဒေသရှိဟိုတယ်အဆောက်အအုံအနည်းငယ်သည်ထိခိုက်ခဲ့သည်။ Guayanilla ရှိ Punta Ventana နှင့်Guánicaရှိမီးပြတိုက်အပျက်အယွင်းများသည်ကျွန်းတစ်လွှားရှိခရီးသွားနေရာ (၂) ခုတွင်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများကိုဖော်ပြခဲ့သည်။ ကျွန်းတစ်လွှားမှအခြားသဘာဝနိမိတ်များကိုမထိခိုက်ခဲ့ပါကကျွန်ုပ်တို့ကျေးဇူးတင်ပါသည်။
•ကူညီလိုသူများအတွက် - ကူညီရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းတစ်ခုမှာသင်၏ခရီးသွားအစီအစဉ်များကိုဆက်လက်ထားရှိရန်သို့မဟုတ်လာမည့်နှစ်တွင်လာရောက်လည်ပတ်ရန်စဉ်းစားရန်ဖြစ်သည်။ ဒေသဆိုင်ရာအမေရိကန်ကြက်ခြေနီအဖွဲ့သည်တောင်ပိုင်းဒေသရှိလူများအားထောက်ပံ့ကူညီလိုသူများအတွက်အလှူငွေများကိုစုဆောင်းသည်။